Orinasa famonoana bibikely, mpamatsy - mpamokatra Pesticide China
Ny glyphosate dia famonoana poizina tsy voafantina, izay mahomby be, ambany poizina, spektrum malalaka ary azo esorina. Ho fanampin'ny ahidratsy tokana, ravina roa, ary ahidratsy maharitra maharitra, toy ny ahitra fotsy sy ny fofona manitra. Ampiasaina hisorohana ny ahidrano sy ala ary ahitra tsy misy fambolena io.
Abamectin dia antibiotika vaovao ho an'ny biby fiompy sy fambolena, fifangaroan'ny avermectin misy 80% avermectin B1a ambany ary ambany kokoa ny 20% avermectin B1b. Ny B1a sy ny B1b dia manana toetra biolojika sy poizina ara-nofo. Manelingelina ny hetsika ara-batana ataon'ny bibikely voan'ny nerveuse io, manakana ny hozatra amin'ny fifandraisan'ny hozatra ary mitarika ny malemy mandra-pahafatiny.
Ho an'ny fikarakarana bibikely voa amin'ny voan-kakao voatahiry, tsaramaso, millet, voanjo, vary, sorghum, tsaramaso, voana tanamasoandro, ary varimbazaha, azo ampiharina ny takelaka satria mikoriana ao anaty fitehirizana entana ny entam-barotra. , tsaramaso, millet, voanjo, vary, sorghum, tsaramaso, voana tanamasoandro, ary varimbazaha, takelaka azo ampiharina rehefa mivoaka ao anaty tahiry ny entana.
Mampiasa fanoherana karazam-bibikely maro karazana, anisan'izany ny coleoptera, diptera, heteroptera, homoptera, lepidoptera ary orthoptera, izy io koa dia mifehy karazana acarina sasany. Ny vokatra dia misy serealy, citrus, landihazo, voankazo, voaloboka, firavaka ary legioma. Ny salanisa dia 5g / ha amin'ny aphididae amin'ny serealy ka hatramin'ny 45 g / ha ny aphididae sy lepidoptera amin'ny voankazo ambony.
Ny vokatra madio dia kristaly fotsy. mp 220 ～ 222 ℃, 1130mg / L ny faharetan'ny rano amin'ny 20 ℃ sy ny pH 7.5, ary tsy hay miharihary ny hydrolisis amin'ny pH 5-9.
Mihatra mora foana izy io, ary misy vokany tsara amin'ny kankana, bibikely ary bibikely.
Ampiasaina indrindra amin'ny voly toy ny vary, fary ary ovy izy io, ary ny fahasalaman'ny biby no ampiasaina hamonoana ny parasy sy ny moka ary ny katsentsitra hafa avy amin'ny saka sy alika.
Thiocyclam 50% SP dia afaka mifehy lepidoptera, coleoptera, diptera ary thysanoptera sasany. Ao amin'ny ovy ho an'ny voangory ovy colorado, amin'ny fanolanana ho an'ny coleoptera sy komple peste lepidoptera, amin'ny vary voamaina ho an'ny boriboribory sy bibikely hafa mpiorina fary fary, amin'ny hazo fihinam-borona ho an'ny lepidoptera, ny legioma ho an'ny mpitrandraka ravina, ary ny lepidoptera sy ny coleoptera isan-karazany.
Ny matrine dia bibikely famonoana poizina ambany. Ny famonoana bibikely dia manana fiasan'ny famonoana olona sy poizina ao amin'ny vavony amin'ny bibikely, ary misy fifehezana tsara ny legioma, ny paoma, ny landihazo ary ny vokatra hafa toy ny laisoa, aphid, mite spider mena.
Beauveria bassiana dia holatra entomogenous an'ny ascomycetes, indrindra ao anatin'izany ny beauveria bassiana sy beauveria brucella, sns., Izay mety hiteraka fanapoizinana amin'ny bibikely, hanakorontana ny metabolisma ary hitarika ho amin'ny fahafatesana. Ny tsiranoka beauveria bassiana tena mahery vaika dia namorona firafitry ny fanafihana teo amin'ny rindrin'ny vatan'ny olitra bollworm landy tamin'ny fitomboana vetivety, raha ny tsindry malemy kosa dia niteraka hyphae mandady amin'ny rindrin'ny olitra. Mahatonga ny fahafatesan'ny bibikely.
Ny metarhizium anisopliae dia misy karazana holatra entomopathogenic ascomycetes, indrindra ao anatin'izany ny beauveria bassiana sy beauveria brucella, sns., Izay mety hiteraka fanapoizinana bibikely, manakorontana ny metabolisma ary mitarika ho amin'ny fahafatesana.